Wararka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in mid kamida diyaaradaha dagaalka mareykanka ay dhulka kusoo dhacday waxaana ka dhashay dhimasho iyo burbur ah.
Taliska ciidanka lugta mareykanka ayaa ku dhawaaqay in laba kamid ah saraakiishooda ay dhinteen kadib markii diyaaradaha nuuca dagaalka ah kulasoo dhacday gobolka California aroornimadii hore ee maanta oo Axad ah.
Diyaaradda soo dhacday oo ah nuuca weerarka ee Apache loo yaqaan ayaa hertisay dhul buuraley ah meel ku dhow saldhigga Fort Irwin ee koonfurta California.
Col. Jason Brown oo ah afhayeen u hadlay melleteriga mareykanka ayaa baayaan uu dhanka emailka ugu diray wakaaladda waraka Reuters wuxuu xaqiijiyay in diyaarad melleteri ay soo dhacday ayna ku dhinteen laba sarkaal balse wuxuu diiday in uu faah faahin dheeri ah ka bixiyo sababta shilkaan keentay.
Afhayeenka uhadlay melleteriga mareykanka wuxuu sheegay in xilligii diyaaraddu dhacaysay ay ku guda jirtay duulimaad tababar oo caadi ah.
Aowladda mareykanka waxay sheegtay in ay dib kasoo sheegi doonto sababta diyaaraddu u dhacday ayna socdaan baaritaanno arrintaas ku aaddan,wararka ayaa intaas ku daraya in la arkayay diyaaradda oo foorar foorar ugusii dhacaysa dhulka saxaraha ah ee loo yaqaan Moojaafi gobolka California
Ciidamo Huwan Ah Oo Lagu Weeraray Duleedka Deegaanka Halgan Ee Gobolka Hiiraan.